Gam akporo Ndị aghụghọ - Androidsis | Gam akporo (Peeji nke 3)
Anyị na-akọwa otu esi gbanye mgbọrọgwụ gam akporo gị site na nkwụsị iji nweta mgbọrọgwụ na ekwentị ma ọ bụ mbadamba ọ bụla na enweghị mkpa PC.
Aghụghọ iji nweta ihe na Facebook ozi
Chọpụta aghụghọ ndị a nke ị ga - enweta ọtụtụ ihe na Facebook Messenger. Mfe aghụghọ maka ngwa gam akporo.
Esi mbanye anataghị ikike Facebook nke enyi gị nwanyị, ndị enyi na ndị enyi. Kpachara anya na ọ dị mfe ịbanye na Facebook wee nweta paswọọdụ gị !!!
Nkuzi vidiyo dị mfe ebe m kọwara otu esi anataghị ikike Facebook ma ọ bụ otu esi enweta okwuntughe iji nweta Facebook site na ndị enyi gị, ndị maara na ezinụlọ.
Aghụghọ iji nweta ọtụtụ ihe na Google Assistant
5 aghụghọ iji nweta ọtụtụ ihe na Google Assistant. Chọpụta karịa gbasara aghụghọ ndị a nke ga - enyere anyị aka iji nweta enyemaka nke Google.
Kacha mma Spotify aghụghọ na gam akporo
Usoro aghụghọ 3 iji nweta ọtụtụ ihe Spotify na gam akporo. Chọpụta aghụghọ ndị a dị mfe iji tinye ngwa a ma ama iji rụọ ọrụ nke ọma.
Usoro kachasị mma maka Google Pixel 2
Sevenzọ aghụghọ asaa kachasị mma maka Google Pixel 2. Chọpụta usoro kachasị mma dị taa iji nweta ihe kachasị na Google Pixel 2.
Ngwa mmetụta uche nke na-enye anyị ohere, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ibudata vidiyo site na YouTube, Facebook, Instagram na ọtụtụ saịtị ndị ọzọ.
Etu esi amata ma ọ bụrụ na igwe mmetụ aka nke ekwentị m mebiri
Fourzọ anọ ịmara ma ọ bụrụ na ogwe aka emetụ aka nke ekwentị mebiri emebi. Chọpụta ụzọ ndị a iji mara ma igwe mkpanaka anaghị arụ ọrụ.
Usoro kachasị mma iji jiri Xiaomi Mi A1. Chọpụta usoro kachasị mma nke na-enyere anyị aka inweta ọtụtụ ihe na ngwaọrụ Xiaomi.
Usoro kachasị mma iji nweta ọtụtụ ihe na OnePlus 5T. Chọpụta aghụghọ ndị a ga - enyere gị aka ị nweta uru site na OnePlus 5T.
Usoro kachasị mma maka gam akporo Oreo. Chọpụta nhọrọ a na aghụghọ ise maka gam akporo Oreo ma nweta ọtụtụ uru na ya.
Usoro kachasị mma iji chekwaa batrị na gam akporo
Usoro kachasị mma iji chekwaa batrị na gam akporo. Chọpụta nhọrọ a nke ị nwere ike ịchekwa ndụ batrị na gam akporo.
[APK] Ihe kacha mma Block-ADS NO ROOT, web ad blocker, ngwa na egwuregwu
The kacha mma Block-ADS NO ROOT, a kpam kpam free na-emeghe iyi ngwa nke ị nwere ike igbochi mgbasa ozi na gị gam akporo,
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịtụgharị vidiyo na gam akporo ma ịchọrọ ime ya n’ụzọ dị mfe, ngwa ngwa ma dịkwa irè, anyị ga-egosi gị otu esi eme ya n’enweghị nsogbu
Ọ bụrụ n ’ịbụ onye na - arụ ọrụ na netwọkụ mmekọrịta a ma chọọ ịmata onye kwụsịrị iso m na Instagram, ugbu a ị nwere ike iji ngwa na ọrụ ndị a mee ya.
Kedu ka m ga-esi mara ma ekwentị m anaghị akwụ ụgwọ? Just dị nnọọ nwere na-eso nzọụkwụ ke ibuotikọ emi ị ga-ahụ na ọ bụ nnọọ mfe ịmata ma ọ bụrụ na ekwentị gị na-agbachi.
Ọ bụrụ na i chetụla na ọ gaghị ekwe omume ijikọ gam akporo na Mac, taa anyị na-egosi gị usoro site na otu esi eme ya n'enweghị ọtụtụ nsogbu.
Pịa iji chọpụta otu esi atụpụ igodo wifi na gam akporo site na iji ngwa ma jikọọ n'efu na netwọki ikuku ị na-amaghị paswọọdụ gị.
Ihe kacha mma telegram bot ibudata egwu efu
N'ebe a, m na-eweta ihe kacha mma Telegram bot ibudata egwu efu na-enweghị ịhapụ ngwa ngwa ngwa ngwa.
Anyị na-ekpughe ihe ị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na onye ọzọ na-agụ ozi WhatsApp gị na nkata gị na otu esi egbochi ha inyocha na akaụntụ WhatsApp gị.
Etu esi edozi atụmatụ mgbe niile na Samsung Galaxy S8
Were zuru uru nke Always On Display ọrụ nke ọhụrụ Samsung Galaxy S8 na S8 Plus na hazie nhọrọ gị niile
[APK] Wzọ abụọ iji budata egwu efu na ogo ogo kachasị dị na VK Music
Ọ bụrụ na ị na-achọ ibudata egwu efu na oke ụda kacha mma, ị nọ ebe kwesịrị ekwesị ebe m ga-egosi gị otu esi eme ya ozugbo site na VK Music.
Anyị na-egosi gị Pokemon Go Cheat nke ị nwere ike ịmanye mgbanwe nke Evee gị na Espeon, Umbreon, Flareon, Vaporeon ma ọ bụ Jolteon. Usoro aghụghọ!
Aghụghọ iji nweta ọsọ ma ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa Yoigo na-arụ ọrụ !!
Anyị na-egosi gị otu aghụghọ iji nweta ọsọ ma ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa Yoigo na-arụ ọrụ, yana n'ụzọ dị egwu.
Taa, m na-enye gị ndụmọdụ ka ị nweere onwe gị ngwa nke anyị ga-enwe ike ibudata ụdaolu kacha mma na ọkwa anaghị akwụ ụgwọ maka gam akporo.
Taa, anyị na-ewetara gị aghụghọ iji melite ọsọ Yoigo yana ndị ahịa ya niile nwere ike ịnweta ndị otu 800 Mhz na 2600 Mhz.
Etu esi etinye ma jiri Huawei Music ibudata egwu efu
Site na arịrịọ a ma ama, taa, anyị na-akụziri gị otu esi etinye ma jiri Huawei Music, ihe ọkpụkpọ egwu egwu mbụ nke Huawei na-enye gị ohere ibudata egwu n'efu.
Google Chrome Atọ: Otu esi achọ ntanetị site na faịlụ onyonyo
Taa, anyị na - ewetara gị Tọmatị Google Chrome ọhụụ nke anyị ga - enwe ike iji wee chọpụta web site na faịlụ onyonyo.
Taa, m na-akọwa etu esi zoo gam akporo Root n’enweghi Xposed arụnyere iji nwee ọ appsụ ngwa dịka HBO Spain, Pokemon Go, wdg, wdg.
Ditto mechara rute Pokemon Go, anyị na-akụziri gị aghụghọ ịchụ nta Ditto
Taa, anyị na-egosi gị aghụghọ ịchụ nta Ditto na Pokemon Go, na ọ bụ na otu n'ime Pokemons na-efu efu mechara rute.
Banye ma chọpụta otu esi ebudata ngwa site na Storelọ Ahịa Play na-enweghị ike ịmepụta akaụntụ Google.
Pokemon Gaa aghụghọ ichu nta ọ bụla Pokemon
Taa, anyị na-ewetara gị Pokemon Go kacha mma ịchụ nta Pokemon ọ bụla, gụnyere Legendary Pokemons ndị siri ike ịchọta.
8 aghụghọ maka Google Chrome nke ị na-ekwesịghị ileghara anya, dị irè maka ihe nchọgharị weebụ niile maka gam akporo
Taa, anyị na-egosi gị na vidiyo 8 aghụghọ maka Google Chrome nke ị na-ekwesịghị ileghara anya, dị irè maka ihe nchọgharị weebụ niile maka gam akporo.
Ihe mkpuchi nke Samsung Galaxy S6 eruola n imomi na ọtụtụ nkọwapụta teknụzụ. You nwere ike ịmata ọdịiche dị na ha na nke mbụ Samsung ọnụ?
5 aghụghọ ị maghị iji nweta ọtụtụ ihe na Playlọ Ahịa Google
Playlọ Ahịa Google bụ otu n'ime ngwa anyị na-aga iji nweta ọdịnaya ọhụrụ. Site na usoro aghụghọ a ise ị ga - enweta karịa.
Esi gbanyụọ nkenke na Samsung (TouchWiz feed RSS)
Taa, anyị na - egosi gị usoro dị mfe ị ga - agbaso iji kwụsị Nkọwapụta na Samsung onye na - agụ nri iwe na - etinye na Touchwiz ọhụrụ.
The Master Ndepụta nke 150+ Google na gam akporo aghụghọ
A ndepụta nke ihe karịrị 150 aghụghọ n'ihi na ndị malitere n'ime gam akporo ma ọ bụ ndị na-achọ jirichaa ha arụpụtaghị na Google.
10 WhatsApp aghụghọ anyị mụtara na 2015
Izi ozi dị ugbu a na 2015. Taa, anyị chọrọ ịkọrọ gị usoro aghụghọ WhatsApp nke kachasị masị gị afọ a.
Ọ bụrụ n ’ihichapụla Playlọ Ahịa Google ma ọ bụ ịnwee ọnụahịa nke enweghị ntinye nke ngwa a, taa, anyị ga-egosi gị otu esi etinye ya aka
4 aghụghọ iji zere aghụghọ WhatsApp
WhatsApp scams na-agbalị izu data ma ọ bụ debanye aha maka ndebanye aha na-aghọwanye ihe nkịtị. Taa anyị na-akụziri gị ka ị zere ha.
Etu esi enyere ndị nrụpụta aka na Xiaomi
Taa, anyị na-akọwa nzọụkwụ site na nzọụkwụ yana onyonyo, otu esi enyere ndị nrụpụta aka na Xiaomi.
Aghụghọ iji wepụ ọkọ na mobile ihuenyo
Ọ bụrụ na ị nwere mkpanaka nwere ọkọ ma ọ bụ akara, taa anyị na-egosi gị ụfọdụ aghụghọ iji wepụ ihe nchapu na ihuenyo mkpanaka
[Atọ] Otu esi ebudata egwu kachasị amasị gị na-etinyeghị ngwa ọ bụla
Ọzọ aghụghọ dị egwu, oge a ka ị budata egwu kachasị amasị gị na-enweghị wụnye ngwa ọ bụla
[Atọ] Otu esi ebudata vidiyo ọ bụla na Tube tube na-enweghị mkpa maka ngwa ọ bụla
Trickzọ dị mfe iji budata vidiyo ọ bụla na Tube tube na-enweghị mkpa maka mmemme ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ.
Usoro 10 iji mepụta ngwa gam akporo ndị gara nke ọma
Ebe ihe karịrị nde atọ dị na ngwa ngwa, ọ na-esiri ike ịme otu ngwa pụọ ​​na ndị ọzọ.
5 aghụghọ iji nweta ọtụtụ n'ime Igbe mbata Google
Achọpụtara igbe mbata Google n'oge na-adịbeghị anya ma na-enye gị ohere ijikwa n'ụzọ kachasị mma mail niile na-abata na igbe mbata
5 aghụghọ dị mkpa maka gam akporo 5.0 Lollipop
Anyị na-egosi gị aghụghọ aghụghọ 5 dị mkpa maka gam akporo 5.0 Lollipop iji nwee ike ịmepe ngwaọrụ na smartwatch ma ọ bụ jikwaa ọkwa ndị rutere
5 mfe aghụghọ iji melite nchebe nke gam akporo gị
Ihe nchebe gam akporo bu ihe di nkpa n’ezie, ma ilekọta ya di nkpa. Taa, anyị na-egosi gị ụfọdụ aghụghọ aghụghọ iburu n'uche.
Aghụghọ gam akporo: Etu esi egwu vidio vidio na 1080p
Ebumnuche nke Android iji nwee ike igwu vidiyo YouTube na 1080p.
#TrucoAndroid iji mee ka ọrụ Google dị mma site na ebe ọ bụla
N'ebe a, m na-ahapụ #TrucoAndroid iji mee ka ọrụ Google dị mma n'ebe ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị maka Bekee.
Ngwa iwu niile nke Google Ugbu a iji iwu "Ok, Google" nke Spanishized ụnyaahụ
Ihe niile ị chọrọ ịma banyere WhatsApp, aghụghọ na ndị ọzọ
Lee ị nwere usoro nke usoro na aghụghọ ka ị mara ihe niile ịchọrọ ịma gbasara WhatsApp.
Egwuregwu gam akporo: Taa otu esi belata oke vidiyo
Taa, m na - eweta aghụghọ Android pụrụ iche maka ndị ọrụ WhatsApp ebe m na - akuzi ha ka ha jiri nchịkọta akụkọ vidiyo etinyere na App.
Nduzi aghụghọ nke Android: Otu esi amalite Google peer-to peer navigation taa ngwa ngwa
Taa na Usoro Ntuziaka maka gam akporo M na-ahapụrụ gị ego iji nwee ike ịnweta igodo olu Google, Navigator n'ụzọ dị ọsọ ọsọ.
Usoro ndu maka gam akporo: Taa otu esi mara ma egbochila gi na WhatsApp
Taa na usoro ndu maka gam akporo otu esi amata ma egbochila gi na WhatsApp.
Trickzọ ọzọ iji megharịa WhatsApp n'efu maka otu afọ ọzọ
Nke a bụ aghụghọ ọzọ iji megharịa WhatsApp n'efu maka otu afọ ọzọ.
Meziwanye arụmọrụ nke Chrome site na aghụghọ a dị mfe
Otu aghụghọ nke na-eme ka arụmọrụ nke Chrome maka gam akporo rụọ ọrụ sitere na onye ọrụ na Reddit.
Etu ị ga - esi mara ma IMEI nke ekwentị nwere ike ghara inwe isi ma enwere ike zuru ya
Mgbe anyị chọrọ ịzụ ọnụ ọnụ ahịa nke abụọ n'ọnụ ọnụ ala, oge ụfọdụ anyị na-atụ egwu na a ga-ezuru ekwentị ahụ. Taa, anyị na - agwa gị otu esi achọpụta IMEI.
Aghụghọ gam akporo (V): Androidzọ mkpirisi gam akporo ọnụ
Shortzọ mkpirisi nke gam akporo ngwaọrụ na-arụ ọrụ nke ọma ebe ọ bụ na ha na-enye anyị ezigbo oke arụmọrụ na naanị otu ịpị
Ntuziaka gam akporo (IV): Ngwa wijetị nke ọnụ anyị
Ihe ndị ahụ niile anyị na-ahụ na tebụl ekwentị dịka elekere, ozi gbasara ihu igwe na ihe ndị ọzọ bụ wijetị. Anyị na-akọwa ihe niile gbasara ha.
Aghụghọ Android (III): Ọgwụgwụ nke ọnụ anyị
Ekele maka post a anyị ga-enwe ike ịmata data kachasị mkpa nke ngwaọrụ anyị, na-eji usoro aghụghọ anyị gosipụtara gị n'okpuru.
Aghụghọ Android (II): TalkBack
TalkBack bụ atụmatụ nnweta maka onye ọrụ ọ bụla, ọkachasị raara nye ndị anya ha kpuru ìsì.
Gam akporo Ndị aghụghọ (M): Onye Ozi
Na nke ọhụrụ a, gam akporo aghụghọ, anyị bu n'obi ịgwa gị banyere zoro ezo gam akporo aghụghọ dị ka onye nwe Ozi.
6 Ndị aghụghọ maka Nexus 4
Taa, m ga-akọwa usoro aghụghọ iji melite ahụmịhe gị na Nexus 4 wee rite uru n'ihe niile ...
Vidio vidio, Ihe Omume Ọhụrụ nke YouTube maka Vidio vidiyo Pụrụ Ihu Peeji: Atọ iji rụọ ọrụ ya
«Na-ebugote vidiyo na YouTube ga-adịtụ mfe. Ka anyị leba anya na ihe ọhụrụ. Akara a bụ nke mbụ ...
Atọ iji rụọ ọrụ bọtịnụ 'Aga m enwe obi ụtọ' na YouTube
Dị ka ị ga-echeta ụnyaahụ, agwara m gị na YouTube na-anwa itinye bọtịnụ Google a ma ama 'Enwere m obi ụtọ'. Ọfọn,…
Aghọ iji wepụ YouTube mgbasa ozi na-enweghị iji ndọtị
Dị ka ị maara na e nwere ọtụtụ ndọtị na-enye anyị ohere iwepu mgbasa ozi na YouTube. Agbanyeghị, enwerekwa obere ...
Otu aghụghọ iji mụbaa ndụ batrị na-aghọ ihe efu
Ọ bụghị "aghụghọ" niile ma ọ bụ ndụmọdụ iji mụbaa ndụ batrị bụ eziokwu, ọtụtụ n'ime ha bụ ụgha, dị ka nke m ga-ekwu maka ya n'isiokwu a.
Inside gị gam akporo e nwere Linux. Weputa ya na Command console "Android Terminal Emulator"
Kernel nke sistemụ arụmọrụ Android bụ Linux. > Ebee ka Linux dị na android m? Gam akporo Terminal emulator na-ewepụta ya na Linux Command console